Umthetho: ubulili be-webcam bubukhoma bukhoma bokukhokha | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya The Law Ubulili be-webcam
I-documentary ku-BBC 3 ebizwa ngokuthi i- "Webcam Boys" ekusakazwa ngoFebruwari 2016 ibike ngekhadi lezinkulungwane zamabhiliyoni, imboni yewebhu yomhlaba wonke. Lilandela izimpilo ze-4 amamodeli amancane ekhamera e-UK. I-Webcaming yilapho abantu abangasese benza khona bukhoma, imisebenzi yokuvusa ngokocansi ngekhamera yekhompiyutha yamakhasimende akhokhayo. Kufana ukuthumela imiyalezo nge-smartphone kepha ngesilinganiso esikhulu. Lesi yisikhathi esincane semboni yezocansi. Kukhona okucatshangwayo ukuthi kungabalandeli be-webcam abesilisa be-100,000 e-UK kuphela.
Amamodeli aqoshwe ku-documentary ayibheka njengendlela yokwenza imali elula, ukwenza izenzo zobulili kuphela noma nabangani ukuthi bazokwenza kanjani noma kunjalo, kodwa manje ngenkokhelo ukuze banelise ama-fetish namafantasi abo abahlukene.
Wonke amamodeli akuphatha njengebhizinisi. Njengoba iningi elitholakalayo, amaklayenti asheshe azothukutheka ngezenzo ze-vanilla zobulili obala futhi afuna okuthile okusha nokuvuselela okunye. Lokhu kusho ukuthi ukugcina amaklayenti ajabule 'amamodeli' ayezama ukuqoqa abantu abasha ebhizinisini noma enze izenzo ezimbi kakhulu ngokwenza ukuthi amakhasimende akhokhe.
Ngokwe-athikili emagazini webesifazane ku-2014, abanye besifazane abasebasha 'benza' ngamadoda kwi-webcams futhi ngokuphindaphindiwe ngezipho abaye bacela nge-Wish Wish List. Kuyindawo elula. Abantu abaningi bathola inqwaba emalini futhi balinganisa ukuziphatha kwabo naphezu kokuphula imithetho yabo yokuziphatha noma labo amalungu omndeni abo abakhathazekile. Abaningi abakubheki njengehlobo lobufebe.
Enye imodeli kule documentary ekugcineni yayifikile umkhawulo wayo wokuzama ukujabulisa amaklayenti amaningi abafuna ukwedlula futhi wanquma ukuthengisa impahla yakhe yemisipha embonini yezokuphepha esikhundleni.
Kungakhathaliseki ukuthi umuntu uhlinzeka ngale ndaba noma uyayifuna, ukulutha kwezithombe zobulili ezingcolile kuyi-intanethi kungumthelela omkhulu kulokhu kubangela imboni.
Ochwepheshe abanobugebengu obuhleliwe bahlasele phansi abasebenzisi bekhokha imali emindenini ehlwempu emazweni ampofu abaphoqelela izingane ezincane ukuba zenze izenzo zobulili obukhoma ngekhamera yewebhu ngenxa yokuxhaswa ngokocansi kwamakhasimende phesheya.
Isibonelo esilandelayo, isibonelo esibi kakhulu sasihamba ngezinyawo Trevor Monk owazitholela ukuhlukumeza amantombazane amancane ePhilippines futhi waboshwa iminyaka engu-19 nengxenye. U-Trevor Monk naye ukhokhele cishe i-£ 15,000 ukubuka ukuxhashazwa kwezingane ngokocansi eManila kwi-webcam yakhe.
Amaphoyisa athole okuningi kunezithombe ze-80,000 namavidiyo angcolile we-1,750 wezingane ekuhlaselweni ekhaya ngo-Mashi 2015. Uvume ukuthi kukhona izingane ezizenzayo futhi ezenza izithombe ezingcolile, ukuhlaselwa kwengane ngaphansi kwe-13 nokugqugquzela ingane ukuba ihlanganyele emsebenzini wobulili.
Enye yamantombazane ayihlukumezayo yayineminyaka eyisishiyagalombili kanti isithombe sengane eneminyaka emithathu ubudala satholwa phakathi kwezithombe. Ijaji u-Anuja Dhir uchaze lezi zithombe "njengezithombe ezisabisayo zezingane ezisencane kakhulu ezihlukunyezwayo futhi zehliswa isithunzi ngendlela embi kakhulu".
<< Imboni Yezocansi